Wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay degmada Badhaadhe iyo cidda la wareegtay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay degmada Badhaadhe iyo cidda la wareegtay
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal ay ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwo Mareykan ah maanta kula wareegeen degmada Badhaadhe ee gobolka J/hoose.
Ciidankaasi huwanta ah ayaa la sheegayaa inay dagaal aad u xoogan ku qaadeen fariisimaha ay degmada Badhaadhe ku leeyihiin dagaalyahanada Al-shabaab, wuxuuna dagaalkaasi qaatay muddo saacado ah.
Degmada Badhaadhe ayaa waxaa muddo 8 sano ah gacanta ku haayay dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab.
Saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen illaa 4 qof oo 2 ka mid ah ay ahaayeen dad shacab ah iyo halka 2 kale ay ahaayeen dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab.
Waxay saraakiishaasi sidoo kale inoo xaqiijiyeen in dagaalka degmada Badhaadhe ay ku dhaawacmeen illaa 10 qof oo u badan labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay.
Dhinaca kale, saraakiishaasi ayaa qiray in dagaalkaasi ay ku gacan siiyeen ciidamo ajaanib ah gaar ahaan kuwa u dhashay dalka Mareykanka, kuwaas oo dagaal cirka iyo dhulka ah ku qaadayay degmada Badhaadhe.
Ma jirto wax war ah oo ay saraakiisha Al-shabaab kasoo saareen dagaalka degmada Badhaadhe looga saaray ciidankooda, iyadoo weli degmadaasi ay ka jirto cabsi laga qabo in dagaalyahanada Al-shabaab ay dagaal rogaal halkaasi kusoo qaadaan.